mairie-antananarivo – Fankalazana ny Andron’ny Vehivavy Kaominina Antananarivo Renivohitra
Fankalazana ny Andron’ny Vehivavy Kaominina Antananarivo Renivohitra
administrateur 9 martsa 2018 Commentaires fermés
Nosokafan’ ny Ben’ny TanànanIarivo Lalao Ravalomanana tamin’ny fomba ofisialy ny Alakamisy 08 martsa 2018 ny hetsika fankalazan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny fetin’ny vehivavy. Nisy ny fanokafana ireo trano eva tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely (parvis) izay haharitra hatramin’ny ny 10 martsa 2018.
Tonga nanatrika izany ny Delegasiona avy amin’ny Vondrona Eropeanina sy ny solontenan’ny Fiarahamonim-pirenena sy ny mpiara-miombonantoka isantokony ary ny mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay anisan’ny nandray anjara betsaka tamin’ity hetsika ity .
Fotom-pivavahana no nanombohana ny lanonana ary nisy ny fandraisam-pitenenana nifandimbiasana. Ny Ben’ny Tananan’Iarivo manokana Lalao Ravalomanana dia niarahaba ny vehivavy rehetra , sady Renin’Antananarivo Renivohitra rahateo izy amin’ny maha Ben’ny Tanana azy. “Tonga izao ny fotoana hiarahan’ny vahoaka eny ambanivohitra sy ny andrenivohitra “ araka ny nambarany ihany izay teny faneva ny andro iraisampirenena ho an’ny vehivavy tamin’ity taona 2018 ity, ny vahoaka koa hoy izy dia tokony ho sarompiaroamin’ny zony ary tsy ekena intsony ny herisetra eo amin’ny vehivavy sy ny ankizy tsy ampy taona.
Nisy ny fanentanana ny lanona toy ny fampisehoana nataon’ny Mialy Rakotomamonjy sy ny diha nataon’ireo AKAMA na ireo ankizy moana marenina avy ao amin’ny ankany ny moana marenina. Teo koa ny fanentanana izay aton’ny fou‘hehy sy ireo artista maro samihafa mandritra ny hetsika.
Androany ihany koa dia nisy ny dinika narahina ady hevitra izay nataon’ny ireo Delegasiona Eropeanina sy ny kaominina Antananarivo, izay voatokana ho an’ ireo vehivavy manana olana eo amin’ny fiarahamonina sy hiarany herisetra.
Entanina araka izany ny olona rehetra mba hitsidika sy andray anjara eny amin’ireo trano eva izay miisa 70 mahery ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Misy ny fisahana fahasalamana maimaimpoana toy ny “Echographie”, ny fitilina sida, ny fanomezana fanabeazana haizana ary ny fandraisana ireo vehivavy izay hiaran’ny herisetra eny amin’ny fiarahamonina sy ireo manana olana rehetra ; Eo koa ny fivarotana ny vonikazo isankarazany ny fivarotana isan-karazany sy ny asa Tanàna Malagasy sy ny karazana sakafo maro ary ireo fikojakojana ny tarehy amam-bika isankarazany …..